स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अ’नियमिता गर्नेलाई का’रबाहीको माग गर्दै गगनले भने- म’हासंकटमा घिनलाग्दो कृत्य ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अ’नियमिता गर्नेलाई का’रबाहीको माग गर्दै गगनले भने- म’हासंकटमा घिनलाग्दो कृत्य !
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अ’नियमिताको दो’षीलाई का’रवाहीको माग गरेका छन्। को’रोना भाइरसका कारण विश्व म’हासंकटबाट गु’ज्रिरहेका बेला पनि अनियमिता हुनु घि’नलाग्दो कार्य भन्दै दो’षीलाई का’रवाहीको माग गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् नेता थापाले दो’षी द’ण्डित नभएसम्म अनियमिताबारे प्रश्न उठाउन नछोड्न पनि आ’ग्रह गरेका छन्। ‘म’हासंकटको अवस्थामा पनि यस्तो घि’नलाग्दो कृत्य !’ उनले लेखेका छन्, ‘स्वास्थ्य सामाग्री खरिद अनियमितताका बारेमा वास्तविक दो’षी द’ण्डित नहुन्जेल प्रश्न उठाउन नछाडौं ।’
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका सांसद थापाले भनेका छन्, ‘दिन ढल्यो, कुरा बिर्सियो हुन हामी कदापि दिने छैनौं।’ सरकारले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि निजी कम्पनी ओम्नी बिजनेस कर्पारेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओ’बीसीआई) सँग सम्झौता गरेको थियो। एक करोड ३ लाख ९४ हजार चार सय अमेरिकी डलरमा गरिएको सम्झौता बजार मूल्यभन्दा बढी भएको भन्दै सरकारको च’र्काे आ’लोचना भएको थियो। सुरुमा खरिद सम्झौता ब’चाउ सरकारले गरे पनि ओम्नी स’मूहले सरकारलाई न’क्कली सामान उपलब्ध गराएपछि बुधबार मात्र सम्झौता र’द्ध गरिएको थियो।
सांसद थापाले सरकार चैत्र २५ गते पछिको रणनीति र यो’जनाबारे पनि प्रश्न गरेका छन्। सरकारले २५ गतेसम्म ल’कडाउनको समय थप गरेको थियो। थापाले यसअघि सरकारलाई को’रोना भाइरसवि’रुद्ध ल’ड्न सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु भन्दै लिखित रुपमै सुझाव दिएका थिए।